Wiilka dahabiga ee reer France Kylian Mbappe oo shuclada kala wareegay Messi… – Hagaag.com
Wiilka dahabiga ee reer France Kylian Mbappe oo shuclada kala wareegay Messi…
Posted on 3 Luulyo 2018 by Admin in Sports // 0 Comments
Markuu garsooraha siiriga yeeriyey dhamaadka kulanki u dhaxeeyey France iyo Argentina tartanka ciyaaraha kubbada cagta adduunka ee ka socda Russia, jamaahiirta ama taageerayaasha kubada cagta adduunka ayey arkayeen xiddiga Argentina Lionel Messi oo u gudbinaya shuclada xiddiga xiddiga soo ifbaxay Kylian Mbappe, oo noqday ciyaaryahanka ugu da’da yar ee reer France oo dhaliya goolal tartanka koobka adduunka 16 dhamaadka.
Mbappe ayaa jira 19 sano, wuxuuna ka dhaliyay labo gool kooxda Argentina isaga oo soo jiitay dadkii daawanayey, wuxuuna soo bandhigay xirfad aad u sareysa oo ka horeysay Messi, Sergio Aguero iyo Higuain iyo saaxiibkiisa xulka Faransiiska Antoine Griezmann.
Waxa uu sidoo kale yahay ciyaaryahanka ugu qaalisan adduunka haatan ka dib xiddiga reer Brazil Neymar.
Wiilkan dahabiga ah oo laga yaabo in France u horseedo in ay qaadaan koobka adduunka markii labaad, wuxuu iftiinkisa ka soo bilowday kooxda Monaco kadibna u dhaqaaqay Paris St Germain heshiis khiyaali ah markii loo fiiriyo da’diisa.
Hooyadiis waa Algerian
Faiza Ammari waa hooyada Mbappe oo aheyd xirfadle kubada gacanta, aabihiis Welfried Mbappe wuxuu ahaa tababare ka socda Cameroon, adeerkiisana sidoo kale.
Waxay aheyd in Kylian u ciyaaro xulalka Cameroon ama Algeria waayo wuxuu wataa labada jinsiyadood iyo sidoo kale jinsiyada Faransiiska.
Saraakiisha kooxda Algeria ayaa durbadiiba la soo xiriiray isaga oo ku jira da ‘yarta da’doodu ka yar tahay 17 sano, laakiin doorashadiisa ayaa ku dhacday xulka kooxda Faransiiska.
Macalinkii Qaranka Faransiiska Didier Deschamp ayaa 2017 ugu yeeray kooxda qaranka France si uu u xiro kiiska kala doorashada, halkaasi oo waraaqihiisa loo gudbiyey xiriirka kubada cagta ee FIFA.
Mbappe oo aad u jeclaa halyeeyga Zinedine Zidane. Wuxuu rabay inuu ugu daydo isaga wax walba. Maalin maalmaha ka mid ah ayaa hooyadiis u kaxeeysey timo jare asaga oo ilmo yar ah ayuu timo jaraha weydiistay in uu u sameeyo sida Zidane ee timo la’aan ka dhigo, asaga oo aaminsanaa in ay tahay nidaam ama mode loo jarto timaha, ma garaneynin in ay waxani yihiin bidaar, halkaasi ayaa ka qarxay qoslka hooyadiis iyo tima jaraha.
Hooyadiis ayaa geyn jirtay xarunta tababarka
Markii looga yeeray xulka qaranka Faransiiska ee 2017, ma uusan heysan liisan darawalnimo. Hooyadiis ayaa gaarigeeda ku gaadhsiin jirtay xarunta tababarka. Waxaa halkaasi si weyn ugu soo dhoweeyey ciyaartoyda xulka Faransiiska ee waaweyn, ilmo yar oo noqday mid wada saaran diirada kubada cagta adduunka, dadka badankiisa ayaa u arka inuu yahay bedelka Zidane, waxayna kooxda buluuga rajeynayaan soo celinta karaamada France.